"डोनाल्ड ट्रम्पले भने जस्तो सजिलो छैन कोरोना भाइरस संग लडाईँ गर्न" #covid19 • Health News Nepal
✍️डा. निरन्जन कोइरला
वरिष्ठ वैज्ञानिक, मकाउ विश्वविद्यालय
कोरोना भाइरस कोरोना विरुद्धको परिवारसँग सम्बन्धित छ, अर्डर निडोविरालेस र क्षेत्र रीबोभाइरिया। तिनीहरू अल्फाकोरोनाभाइरस र बेटाकोरोनभाइरसमा विभाजित हुन्छन् जसले स्तनपायीहरूलाई संक्रमित गर्दछ, र गामाकोरोनाभाइरस र डेल्टाकोरोनभाइरस जसले मुख्य रूपमा चराहरूलाई संक्रमित गर्छ। बेटाकोरोनाको सात दाजुभाई छन। तिनीहरू भित्र यो कोविड 19 खतरनाक छ। यो भाइरस खान बस्नेको लागी फोक्सो मनपराउछ।
कोरोनाभाइरस पहिलो चोटि 1930 को दशकमा पत्ता लागेको थियो जब घरेलु कुखुराको श्वासप्रणाली संक्रमण संक्रामक ब्रोन्काइटिस भाइरस (आईबीभी) को कारण देखा पर्यो। मानव कोरोनाभाइरस 1960 को दशकमा पत्ता लागेको थियो। सबैभन्दा पहिले अध्ययन गरिएका रुगा-खोकि भएका मानव बिरामीहरूबाट आएका हुन् जसलाई पछि मानव कोरोनाभाइरस २२E र ह्युमन कोरोनाभाइरस ओसी C43 भन्ने नाम दिइयो।अन्य मानवीय कोरोनाइरसहरूको पहिचान पछि भए । 2003 मा सार्स-कोभ, 2004 मा एचसीओवी एनएल 63, 2005 मा एचकेयू १, 2012 मा मर्स-कोभ, र 2019 मा सार्स-कोभ -२ समावेश छ। यी मध्ये धेरैले श्वासप्रश्वासको गम्भीर संक्रमणमा संलग्न भएका छन्।
कोरोनाभाइरसमा +SS आरएनए (RNA) जीनोम हुन्छ। कोरोनाभाइरसका लागि जीनोम आकार 26.4 देखि 31.7 किलोबास (KBs) हुन्छ। जीनोम आकार आरएनए भाइरसहरू मध्ये कोरोनाभाइरसमा सब भन्दा ठूलो हो। संक्रमण शुरू हुन्छ जब भाइरल स्पाइक (S) ग्लाइकोप्रोटीनले यसको पूरक होस्ट सेल रिसेप्टरमा टाँसिन्छ ।
त्यसपछि भाइरस होस्ट सेल भित्र प्रवेश गर्दछ र होस्ट सेल मेशिनरी हाइज्याक गर्दछ र भाइरसको लाखौं प्रतिलिपिहरू सिर्जना गर्दैअन्ततः अधिक भन्दा अधिक मानव कोषहरू संक्रमित हुन्छन्।
2019 डिसेम्बरमा, चीनको वुहानमा निमोनिया प्रकोप देखा पर्यो। 31 डिसेम्बर 2019 मा, प्रकोप नोबल कोरोना भाइरसको कारणले पत्ता लागेको थियो जुन विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा अन्तरिम नाम 2019-nCoV दियो, पछि पुन: नाम दिए SARS- CoV-19 । केही अनुसन्धानकर्ताहरूले यो भाइरस वुहानको स्थानीय मासु बजारबाट सुरु गरेको हुनुपर्छ भन्छन् । 11 अप्रिल 2020 सम्म, करोनभायरस निमोनिया महामारीमा कम्तिमा 103,500 जना निधन भएका पुष्टि घटनाहरू छन्। महामारीको कारण विश्वव्यापी यात्रा प्रतिबन्ध र राष्ट्रव्यापी लकडाउन भयो ।
कोरोना भाइरसको समाधान एन्टिवाइरल्स र एन्टिबडीहरूको माध्यमबाट मात्र सम्भव छ। यसबाहेक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भनेझैं यो वैज्ञानिक रुपमा प्रमाणित भैसकेको छैन कि मलेरिया को औषधि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइनले कोरोना भाइरसका बिरामीहरुलाई मद्दत गर्न सक्छ । हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइनको साइड इफेक्ट पनि धेरै नै देखिन सक्छ।
यद्यपि विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले यस कोरोना भाइरसको लागि जादू गोली भ्याक्सिन खोजी गर्दैछन्, यस्तो देखिन्छ कि यस उत्पादनलाई व्यावसायिक रूपमा उपलब्ध हुनु अघि उत्पादनलाई धेरै ट्रेल्सहरूको माध्यमबाट पार गर्नु आवश्यक पर्दछ। त्यसकारण संक्रमणबाट बच्नको लागि मानिसहरू सावधान हुनुपर्दछ र साधारण नियमहरूको पालना गर्नुपर्दछ।
कोरोना संक्रमण रोक्नको लागि सामाजिक दूरी राख्नुपर्दछ, घर बाहिर जानु हुँदैन, क्वारेन्टाइनको पालना गरिनु पर्छ, लगातार तातो बेसार र लसुन पानीको सेवन गर्नुपर्दछ र बारम्बार हात धुने काम गरिनु पर्दछ। यदि तपाईंलाई ज्वरो, खोकि र सास फेर्न गाह्रो भयो भने तुरुन्तै डाक्टरको सल्लाह लिनुहोस् किनकि यो सास फेर्ने संक्रमण वा अन्य गम्भीर अवस्थाको कारणले हुन सक्छ।
अग्रिम कल गर्नुहोस् र तपाईंको प्रदायकलाई कुनै भर्खरको यात्रा वा यात्रुहरूसँगको सम्पर्क बताउनुहोस्। किन? अग्रिम कल गर्दा तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई चाँडो तपाईंलाई सहि स्वास्थ्य सेवामा डाइरेक्ट गर्न सजिलो हुनेछ। यसले COVID-19 र अन्य भाइरसहरूको सम्भावित प्रसार रोक्न पनि मद्दत गर्दछ।
सजक रहौ सुरक्षित रहौ